မဟာဇောတိက ဓမ္မဒါန: ကဆုန်လပြည့်နေ့
ဤဆိုဒ်သို့ လာရောက်လေ့လာသူများ နှင့်အတူတကွ ၃၁ ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သော ဝေနေများစွာ သတ္တဝါအားလုံး စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေ ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြစ် ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိတို့၏ ခန္ဓာဝန်ကို ကျေပွန်စွာရွက်ဆောင် နိုင်ပါစေ ။
ကဆုန်လကို ပုဂံခေတ်က ကုဆုန်၊ ကူဆုန်၊ ကဆုန်၊ ခူဆုန်၊ ခုဆုန်ဟု အမျိုးမျိုးရေးသား ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာကို ကျောက်စာများအရ သိရှိကြပါတယ်။ ကုဆုန်မှာ မူရင်း ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး ကဆုန်စသော ကျန်ဝေါဟာရများမှာ ကုဆုန်မှ ရွှေ့လျားပြောင်းလဲလာသော ဝေါဟာရများဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုဆုန်နှင့် ကဆုန်တို့ရှိ ကု၊ က ပုဒ်တို့မှာ ကုတို့၊ ကုခန်း၊ ကစွန်း၊ ကညှို့၊ ကတောက် စသော ဝေါဟာရတို့ရှိ ကု၊ က ပုဒ်တို့ကဲ့သို့ “ရေ” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါ တယ်။
စုန်မှ ဆင်းသက်လာသော ဆုန်မှာ သွန်းခြင်း၊ လောင်းခြင်း၊ ဖျန်းခြင်း အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကဆုန်လ အဓိပ္ပာယ်မှာ ရေသွန်းသောလ၊ ရေလောင်းသောလ၊ ရေဖျန်းသောလ ဟုဆိုလိုပါတယ်။
မည်သည့် အရာများကို ရေသွန်းလောင်းသလဲ မေးလာလျှင်၊ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရား သစ္စာလေးပါး မြတ်တရားကို ပိုင်းခြား ထင်ထင် သိမြင်တော်မူရာ မဟာဗောဓိပင်ပွား ဗောဓိပင်များကို ရေသွန်းလောင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဟု ဖြေရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ်နေကြသော ဂေါတမ ဘုရားရှင်သည် သုမေဓာ ရှင်ရသေ့ဘ၀တွင် ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားထံတော်မှ “နောင်သောအခါတွင် ဘုရားစင်စစ် ဧကန်အမှန် ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု နိယတဗျာဒိတ်ကို ရရှိတော်မူခြင်းသည် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာသက္ကရာဇ် (၆၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့မှာပင် ဘုရားအလောင်းကို ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားအလောင်းကို ဖွားမြင်တော်မူသည်နှင့် တပြိုင်နက် ယသောဓရာ မင်းသမီး၊ အာနန္ဒာမင်းသား၊ ဆန္ဒအမတ်၊ ကာဠုဒါယီအမတ်၊ ကဏ္ဍကမြင်း၊ ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးနှင့် မဟာဗောဓိပင် ဟူသော ဖွားဖက်တော် ခုနှစ်ဦးတို့သည်လည်း ဖွားမြင်ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ မဟာဗောဓိ သည် မဇ္ဈိမဒေသ ဥရုဝေလတောတွင် ဘုရားရှင်တို့ ပွင့်တော်မူရာ ဗဟိုအချက်အချာ အောင်မြေအရပ်၌ ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့၌ ဘုရားအလောင်းသည် မဟာဗောဓိပင်ရင်း၌ သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်းသိမြင်၍ သဗ္ဗညုဘုရားရှင် အဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ထိုမဟာဗောဓိပင်သည် ဘုရားရှင်၏ ဖွားဖက်တော် ခုနှစ်ဦးတွင် တဦးအပါအ၀င် ဖြစ်သည့်အပြင် ဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိရန် အားထုတ်တော်မူရာ၌ အသုံးပြုတော်မူသော အပင်ဖြစ်၍ ပရိဘောဂစေတီလည်း ထိုက်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အပေါင်းတို့သည် ထိုဗောဓိပင်မှ ပင်ပွားများကို မိမိတို့ နိုင်ငံ၌ စိုက်ပျိုးကိုးကွယ် လေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာ ရောက်ချိန်ကပင် စတင်၍ ဗောဓိပင်များကို စိုက်ပျိုးကိုးကွယ်ခဲ့ကြဟန် ရှိပါတယ်။ နွေရာသီ အလယ်ဗဟိုကျတော့ မြန်မာတို့၏ ကဆုန်လကား နေပူပြင်းလှပါတယ်။ “တန်ခူးရေကုန် ကဆုန်ရေခမ်း” ဆိုသလို ကဆုန်လတွင် အင်းအိုင်၊ ကန်ချောင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းများ ခြောက်ခမ်း၍ ရေပြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရေပြတ်၍ အပူချိန် ပြင်းခြင်းတို့ကြောင့် အချို့သစ်ပင် ပန်းပင်များမှာ နွမ်းခြောက် ပျက်စီးကြရပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် ရှေးမြန်မာတို့သည် မိမိတို့ အမြတ်တနိုး ကိုးကွယ်ထားကြသည့် မဟာဗောဓိညောင်ပင်များ ညှိုးနွမ်းပျက်စီးမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗောဓိပင်ဆိုသည်မှာလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သီဟိုဠ်နိုင်ငံတို့ရှိ မူလဗောဓိပင်တို့မှ ဆင့်ပွားယူရသော အပင်မျိုးဖြစ်၍ ရှားပါးပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ရှေးခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတို့သည် ပူပြင်း၍ ရေပြတ်သော ကဆုန်လတွင် ဗောဓိပင်များကို မညှိုးမနွမ်း၊ လန်းဆန်းရှင်သန်စေရန်ဟူသော ဆန္ဒမွန်ဖြင့် ရေသွန်းလောင်း ပူဇော်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသို့ဖြင့် ဘုရားအလောင်းတော် ဗျာဒိတ်တော်ခံယူခြင်း၊ ဖွားမြင်တော်မူလာခြင်း၊ မဟာဗောဓိပင် ပေါက်တော်မူခြင်း၊ ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း တို့သည် ကဆုန်လပြည့်နေ့များပင် ဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်ကဆုန် လပြည့်နေ့မှာပင် ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော် မူခဲ့သောကြောင့် ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဗုဒ္ဓနေ့ ဟု ရှေးပညာရှိတို့က ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဖွား၊ ပွင့်၊ ဟော၊ စံ၊ ဗျာဒိတ်ခံ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ။ ကဆုန်လပြည့် (၅)နေ့။
(၁) ဗျာဒိတ်ခံယူသည့်နေ့ = လေး သင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်း အစ ကဆုန်လပြည့်နေ့။
3. (၃) ဘုရားဖြစ်သည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)။ (ဘီစီ ၅၈၈)
4. (၄) ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်းဟောသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၄)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့။ (ဘီစီ ၅၈၇)
5. (၅) ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် (အင်္ဂါနေ့)။ (ဘီစီ ၅၄၃)
စာဖတ်သူများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနှင့် မိမိတို့ ခန္ဓာဝန်ကို ရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ…
(၅) ဖွားပြီးပြီးခြင်း မြောက်အရပ်သို့ ခြေ (၇)လှမ်းကြွကာ…“ဤလောက၌ ငါသာ အမြတ်ဆုံးတည်း ၊ ငါ၏ နောက်ဆုံး ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်းတည်း ၊နောက်ထပ် ပဋိသန္ဓေ နေစရာ မလိုတော့ပြီ ”ဟု ကြုံးဝါးတော်မူပါသည်။ (ထိုကာလတွင် အကိုးကွယ်ခံ ဘ၀သို့ ရောက်မှန်းမသိရောက်နေသော ဗြဟ္မာတွေကို အသိပေးကြုံးဝါးခြင်း ဟုဆို၏။ ဂေါတမ ဘုရားလောင်းသည် (၃) ဘ၀၌ ဖွားစမှာပင် စကားပြော၏။
Posted by maharzawtika at Tuesday, October 01, 2013
Labels: ဗုဒ္ဓဘာသာ နေ့ထူးနေ့ရက်များ
ဤဆိုက်တွင်ပါရှိသော posts များသည် တခြား ဆိုက်များမှ ကူးယူ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို posts ပိုင်ရှင် များ ကို ကြိုတင် ခ္ဂင့် မတောင်း ပဲ ကူးယူခဲ့ မိသည်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် အထူး တောင်းပန် ပါသည် ။
Gold price estimated
ငါတို့ဖြစ်ရ ၊ ဤလောကဝယ်
ဘဝသမိုင်း ၊ မရိုင်းစေရန်
ဒို့သာသနာ ၊ ဒို့ပြည်ရွာကို
သာယာစေမူ ၊ လုံ့လပြုအံ့ ။ ။
ဣမိနာ ပုညကမ္မေန၊ ဘဝေသု အာဘိဓမ္မိကာ။
အဘိဂစ္ဆေမ နိဗ္ဗာနံ၊ အဘိဒဇ္ဇေမ ပတ္ထိတံ။
ဣမိနာ ပုညကမ္မေန၊ လိုချင်ဆန္ဒ ၀ီရိယနှင့် စိတ်ကပြင်းထန် ပညာဉာဏ်ရှိ အဓိပတိ(၄)ပါး လက်ကိုင်ထားလျက်
ပူဇော်ကြရသော ဤကောင်းမူကံ စေတနာကြောင့်။
မယံ၊ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာအား၊ အခါရှည်မော တည်စေသောဟု၊ စိတ်စောမူလ၊ ပဓာနဖြင့်၊
ရွှတ်ဖတ်နာကြား၊ သဒ္ဓွါဖွါးလျက် စုပေါင်းပြုလုပ် အကျွှန်ုပ်တို့သည်။
ဘဝေသု၊ နိဗ္ဗာန်မရမီစပ်ကြား ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသော ဘ၀စက်ဝိုင်းတို့၌။
အာဘိဓမ္မိကာ၊ လုံ့လဆက်ဖန်၊ ကြိုးအားသန်လျှက်၊ ဉာဏ်အဆင့်ဆင့်၊ ရင့်ထက်ရင့်သား၊
လင်းပွင့်ထွန်းပြောင်၊ အဘိဓမ္မာဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်။
ဘဝေမ၊ အဆစ်အဖု ထစ်မခုဘဲ တောင်းဆုကုံလုံ ပြည့်စုံရပါလိုကုန်၏။
နိဗ္ဗာနံ၊ တဏှာ၏နယ်အတွင်းမှ လွတ်ကင်းရာမှန် ပြည်နိဗ္ဗာန်ကို။
အဘိဂစ္ဆေမ၊ မဂ်ဉာဏ်(၄)ခု ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့ရူမျက်မှောက် ရောက်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား။
ပတ္တိတံ၊ ယခုပြုရ ကုသလ၏ များစွာကောင်းမှု၊ အဘို့စုကို။
ပဇာယ၊ လူအရပ်ရပ်၊ နတ်နတ်တကာ ဗြဟ္မမကြွင်း ခပင်းဥဿုံ အလုံးစုံသော သတ္တ၀ါအပေါင်းအား။
အဘိဒဇ္ဇေမ၊ အကျွန်ုပ်တို့နည်းတူ၊ ရပါစေဟု ဖြူစင်သာလှ သဒ္ဓါဗလ၀ဖြင့် ဒါနပတ္တိ အနှံ့ပြည့်အောင်
သဗ္ဗေသတ္တာ၊ ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ လုံးစုံများစွာ သတ္တ၀ါတို့သည်။
ဣမံပုညဘာဂံ၊ အကျွန်ုပ်တို့ ဆည်းပူးအားထုတ် ပြုလုပ်အပ်သော ဤကောင်းမူကုသိုလ်၏ အဘို့ဘာဂကို။
လဘိတွာ၊ ကိုယ်စီကိုငယ်ငှ၊ ရရှိကြကုန်သည် ဖြစ်၍။
သုခိတာ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာခြင်း ရှိကြကုန်သည်။
ဘ၀န္တု၊ မုချမသွေ ဖြစ်ကြပါစေ ကုန်သတည်း။
ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော် သင်တန်း ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ် နာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
ဒေါက်တာနန္ဓမာလာဘိဝံသ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ
ပဲခူး အောင်သုခ ဆရာတော် ဦးစန္ဓိမာ တရားတော်
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ 1-26
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော် ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံ
သတ္တဌာန ခုနှစ်ပါတ်ဖြစ်စဉ် ဗုဒ္ဓ၀င်
ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ ပဌာန်းဒေသနာ
ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော် သင်တန်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
အနတ္တ ဒီပနီ ၃-ကျမ်းတွဲ
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - ပဌမတွဲ (ပဌမပိုင်း)
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - ပဌမတွဲ (ဒုတိယပိုင်း)
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - ဒုတိယတွဲ
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - တတိယတွဲ
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - စတုတ္ထတွဲ
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - ပဉ္စမတွဲ
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - ဆဌမတွဲ (ပဌမပိုင်း)
နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် - ဆဌမတွဲ (ဒုတိယပိုင်း)
မေတ္တ္တာ နှင့် သစ္စ္စာ အဖွင့်
ဗုဒ္ဓဘာသာလက်စွဲ (တ-တွဲ၊ စ-တွဲ)
ဗုဒ္ဓဘာသာလက်စွဲ (ပ-တွဲ၊ ဒု-တွဲ)
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ကို ပဋ္ဌာန်းနည်း ဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင...
၀ါခေါင်လပြည့် - မေတ္တာအခါတော်နေ့ တရားတော်
ငရဲကြီး ရှစ်ထပ်အကြောင်း (သို.) ငရဲ၏ဒုက္ခဆင်းရဲများန...
“မေတ္တာပွားရကျိုး” နှင့်၊ “မေတ္တာပွားသည့်အခါ အစွမ်းထ...
ကောသလမင်းကြီး၏ အိမ်မက် (၁၆) ချက်
၅၂၈ သွယ်​​​မေတ္တာ (1)
ပရိတ်ကြီး ၁၁-သုတ် (1)
ဖား​အောက်​​တောရ ဆရာ​တော်​ဘုရားကြီး၏ ဓမ္မဗွီဒီယိုများ (5)
ဗုဒ္ဓဘာသာ နေ့ထူးနေ့ရက်များ (12)
ဘာသာရေး စာအုပ်များ (19)
အဘိဓမ္မာ မြတ်ဒေသနာ (87)
စီး ပွား လွာဘ် ပွင့်
ရောင်တော်ဖွင့် + Playlist
ညဏ်ပညာများ တိုးတက် ကြီးပွါးပါစေ
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု......ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု.......ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု...... Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.